News & Features Nay Thiha - October 18, 2019 0
အာရွမွာႏို႔ထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီေတြထဲက ထိပ္တန္းအမွတ္တံဆိပ္တခုျဖစ္တဲ့ Yili ဟာ သူ႔ရဲ႕ AMBROSIAL ဒိန္ခ်ဥ္ကို ျမန္မာနဲ႔စင္ကာပူတုိ႔မွာဒီႏွစ္အတြင္းျဖန္႔ခ်ီသြားေတာ့မွာပါ။ အရင္လကစင္ကာပူႏုိင္ငံမွာျပဳလုပ္က်င္းပတဲ့စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို Myanmore Plus ကတက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ျပီး Mongolia Yili Industrial Group ရဲ႕ Vice President Mrs. An Lei နဲ႔အင္တာဗ်ဴးခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီဒိန္ခ်ဥ္ကေစ်းကြက္ထဲမွာေရာင္းခ်လ်က္ရွိတဲ့ဒိန္ခ်ဥ္ေတြထက္ ဘာေတြပိုထူးျခားမႈရွိလဲ၊ ဖတ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။ အရင္ဆံုးဒီပြဲရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေျပာျပေပးပါ။ က်မတုိ႔ရဲ႕ AMBROSIAL ဒိန္ခ်ဥ္ကိုအေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္မွာစတင္ျဖန္႔ခ်ီေတာ့မွာပါ။ စင္ကာပူနဲ႔ျမန္မာမွာ အရင္ဆံုးျဖန္႔ခ်ီသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက AMBROSIAL ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းအစီအစဥ္ရဲ႕ ပထမဆံုးေျခလွမ္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။...
News & Features Soe Thiha Htun - May 13, 2020 0
Covid-19 အကြောင်းသုတေသနပြုနေသူ ဆေးသိပ္ပံ‌ပါ‌‌မောက္ခတစ်ဦးသတ်ဖြတ်ခံရ
News & Features Soe Thiha Htun - May 7, 2020 0
Coronavirus ရဲ့ဆဲလ်အကြောင်းလေ့လာနေတဲ့ တရုတ်လူမျိုး အမေရိကန်နိုင်ငံသားဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦး အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရကြောင်း CNN သတင်းဌာနက ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Pittsburgh တက္ကသိုလ်က Bing Liu လို့အမည်ရတဲ့ သုတေသနလက်ထောက်ပါမောက္ခကို သူ့ရဲ့နေအိမ်အတွင်းမှယ ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်း၊ ရင်ဘတ်နဲ့ ခြေ လက်သေနတ်ဒဏ်ရာ‌တွေနဲ့သေဆုံး‌နေကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာ Ross ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်‌တွေက တွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေက Liu ကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခဲ့တယ်လို့...
COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုကော်မတီက Stay Home Period နှင့် 10pm-4am curfew” အချိန်‌ကာလများကို ထပ်တိုးသတ်မှတ်
News & Features Soe Thiha Htun - April 24, 2020 0
COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးဗဟိုကော်မတီက ရောဂါပိုးကူးစက်မှုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ ၁၈ ရက်က သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ 'ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့ထိ' Stay Home ကာလကို 'မေလ (၁၅) ရက်နေ့အထိ' တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီး "ည ၁၀ နာရီကနေ မနက် ၄ နာရီအချိန်အတောအတွင်း အပြင်မထွက်ရ" အမိန့်ကိုလည်း 'နောက်ထပ် ၂...
Drone Picture တွေထဲမှာမြင်ရတဲ့ အိမ်တွင်းပုန်း‌‌သူတို့ရဲ့ဟန်ပန်အမျိုးမျိုး
International Soe Thiha Htun - April 7, 2020 0
စာဖတ်သူတို့ရဲ့ အိမ်ထဲမှာချည်း‌နေ‌နေရတဲ့ခံစားချက်က ဘယ်လိုများရှိမလဲ? အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့အချိန်‌တွေမှာငကာ ဘာတွေလုပ်ဖြစ်ကြလဲဗျ? Adas Vasiliauskas ဆိုတဲ့ Lithuanian ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးကတော့ COVID-19 Outbreak Quarantine ကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အလုပ်တွေအားလုံးကိုဖျက်ထားရချိန်မှာ အကြံ‌ကောင်းတစ်ခုကို တွေးမိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လူအချင်းချင်းထိတွေ့မှုကင်းအောင်နေကြရတဲ့အခြေအနေအတွင်းမှာ zero-human-contact နည်းလမ်းနဲ့ လူတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြည့်ဖို့ပါပဲ။ အစမှာ သူက Drone တစ်စင်းကိုအသုံးပြုပြီး သူငယ်ချင်းတချို့ရဲ့ပုံတွေကို အစမ်းရိုက်ကူးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။...
News & Features Nay Thiha - February 24, 2020 0
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Inya Lake Hotel အတြင္းက Yangon Convention Center မွာ ၃ရက္တိတိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကားျပပြဲ (Yangon International Motor Show) ဟာ မေန႔ကေအာင္ျမင္စြာနဲ႔ျပီးဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ရက္ေန႔မွ ၂၃ရက္ေန႔အထိက်င္းပခဲ့တဲ့ဒီျပပြဲမွာ BMW၊ Brilliance၊ DFSK၊ Ford၊ Fuso၊ GAC၊ Jaguar၊ Land Rover၊ Mazda၊...
COVID-19 ကာကွယ်ကုသဆေးရရှိနိုင်ဖို့ နီးစပ်လာပြီလား
သိပ်မကြာ‌ေသးခင်ရက်ပိုင်းက Covid-19 ကို ကုသနိုင်တဲ့ဆေးထွက်တော့မယ်/ ထွက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းအ‌ေတာ်များများ ထွက်လာခဲ့ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်ရေးဆေးဝါး Remdesivir က Coronavirus ကို နှိမ်နင်းပစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသံဗလံတွေလည်း ဆူညံလာခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေ ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်သင့်၊ မရောက်သင့်စမ်းသပ်မယ့်အဖွဲ့အစည်းက စုစုပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ရှိပြီး အဲဒီထဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရှီကာဂိုဆေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်အချင်းချင်း Remdesivir နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုနေကြတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ပေါက်ကြားလာတာကို...